Inbadan oo aad ammaaneyso oo aad u dabaaldegto noloshaada, ayaa waxa sii badanaya nolosha in loo dabaaldego. - Oprah Winfrey - xigasho Pedia
Noloshu waa duco dhammaanteen. Waa safar aan caadi aheyn oo qaybtiisa kor iyo hoosba leh. Waxaan hibo u leenahay farxadda hooyo dhulka iyo cilaaqaadka aan kobcinno inta aan koreyno.
Haddii aad hareerahaaga eegtid, waad la yaabi doontaa tirada waxyaabo aad uga badan inta qof idinka mid ah leeyahay. Waxaan uun nahay uun ciid ciid ah adduunkan oo dhan, hadana waxbadan baan qaban karnaa. Waa inaan sidaas samayno, oo sida ugu wanaagsan nolosheenna ugu noolaano oo ugu noolaanno sida ugu waxtarka badan ee suurtagalka ah.
Mararka qaar waxaan u dabaaldegnaa oo keliya dhacdooyin muhiim ah. Laakiin haddii aan baranno sida loogu mahadceliyo oo aan ugu dabaaldegno waxyaabaha yar yar ee nolosha marar badan, markaa laga yaabee inaan dhammaanteen noqonno kuwa aad u wanaagsan oo aan ku faraxno nolosha. Waa inaan barannaa sida wanaagsan ee dadka kale loo arko oo aan u ammaano. Tani waxay kor u qaadaysaa kuwa kale inay sii wadaan camalkooda wanaagsan oo ay qaadaan talaabo kale oo horay loogu qaado jihada saxda ah.
Markaad ammaanto oo aad dabaaldegto noloshaada marar badan, markaa waxaad arkeysaa suurtagalyo badan oo aad rabto inaad isku daydo. Tani waxay keenaysaa waayo-aragnimo badan oo ina qaabaysa si aynu u noqonno aadam bini-aadam badan. Markaa, waxaan helnaa sababo badan iyo munaasabado lagu dabaaldego.
Noloshu waxay noqotaa mid aad u raaxo badan. Markii aan dabaaldegno oo aan ammaano nolosheenna, waxaan garwaaqsan nahay sida aan runtii mudnaan u leenahay. Markaa waa waajibkayaga inaan caawinno dadka kale ee baahan. Tani waxay ka dhigeysaa noloshooda mid hagaagsan oo taas baddalkeed, waxay ka dhigeysaa bulshadeena inay sii socdaan. Haddii aan kobcin karno maskaxdan, markaa waan awood karnaa noolow nolol mahadnaq iyo midho-dhala.
Xigashooyin yaab leh nolosha
U dabaaldeg xigashooyinka nolosha
U dabaaldeg xigashooyinka
Ku raaxayso xigashooyinka nolosha
Xigashooyin caan ah oo kusaabsan nolosha
Xigashooyinka nolosha farxadda leh
Erayada Nolosha ee lagu noolaado
Xigashooyinka togan ee ku saabsan nolosha
Naftaada iskaga ilaali dadka kaliya ee kugu kici doona sare. - Oprah Winfrey
Baahida loo qabo in dadku yeeshaan noloshaada oo kicin doona naftaada, dhiirrigelin doona, oo kugu riixaya ...
Samee waxaad samayn lahayd ilaa intaad ka qaban karto waxaad rabto inaad qabato. - Oprah Winfrey
Samee waxaad samayn lahayd ilaa intaad ka qaban karto waxaad rabto inaad qabato. - Oprah Winfrey…
Ku mahadnaq waxa aad haysato; waxaad ku dhamaan doontaa inaad intaas inbadan haysatid. Haddii aad xoogga saartid waxa aadan haysan, weligaa ma helaysid, weligaa ma heli doontid. - Oprah Winfrey
Nolosha, malaha wax micno ah inaad ka caajiso waxyaabaha aadan haysan! Tani waxba ma qaban doonto oo…
Nabarkaagana xigmad geli. - Oprah Winfrey
Guul darrooyinka nolosha waa lama huraan. Waxaan lahaan doonaa qaybteenna kor iyo hoos. Waxaan ubaahanahay inaan wajaho…
Waa kalsoonida ku jirta jirkeena, maskaxdeena, iyo ruuxdeena taasoo noo ogolaaneysa inaan sii wadno raadinta raadad cusub. - Oprah Winfrey
Waa kalsoonida ku jirta jirkeena, maskaxdeena, iyo niyaddeena oo noo ogolaaneysa inaan sii wadno raadinta raadad cusub.…